Wararka Maanta: Jimco, July 12, 2019-Wariye Hodan Naaleeye oo ka mid noqotay dadkii ku dhintay qaraxyadii caawa ka dhacay magaalada Kismaayo
Wararka ayaa intaa ku daraya in sidoo kale uu weerarka hoteelka ku geeriyooday Fariid Jaamac oo ahaa Hoday Naaleeye seygeeda kana mid ahaa siyaasiyiinta Jubbaland.
Wararka ayaa intaa ku daraya in dadka caawa ku dhintay weerarka hotelka Cascaseey uu ka mid ahaa Wariye Maxamed Sahal Cumar oo loo yaqaanay Gacmo -Dheere.
Wariye Hodon Naaleeye ayaa waxa ay madax ka ahayd taleefishinka Integration oo muuqaalo badan laga daawaday iyadoo safari ku tegi jirtey gobolada dalka Soomaaliya.
Waxey aheyd qof caan ku ahaa Barnaamijyada la xiriira arrimaha bulshada iyo dukumantari-yo inta badan ku saleysan nolasha bulshada oo dhinacyo badan taabanaya.
Warka ku sabsan Geerideeda ayaa siweyn ugu faafahay baraha bulshada, madaama ay aheyd qof siweyn ay u garanayaan dadka ku hadla afka Soomaliga kuwaa oo u xiiseyn jiray filimada iyo Barnaamijyada ay ka diyaariso Soomaaliya.